Nisy fotoana ianao sy ny vadinao, na namana fotsiny tovolahy tsy afaka foana hiala samy tanana, nefa ankehitriny efa niova zavatra ary zara raha tsapan'izy toy ny fanaovana ny fitiavana. Mitovy ve izany ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao ianao amin'ny? Mba hahazoana antoka fa manana betsaka araka izay mahafinaritra nampiasaina mba manana amin'ny namany aloha, mianatra ny fomba hahazoana ao amin'ny toe-po noho ny fitiavana.
Ataovy tonga lafatra ny ambiance
Ny ankamaroan'ny mpivady nandritra ny andro voalohany ny fifandraisany mila tsy miankina fotsiny amin'ny zorony mba namely ny fitiavana tanteraka fanaovana toe-po. Na izany aza, toy ny fifandraisana mitombo be taona, manomboka very ny mpiaro ampiasaina indray mandeha ho lovanareo. Ny fananana ny ambiance tsara ny olona afaka manampy ireo toe-po mba ho mora kokoa noho ny fitiavana.
Afaka miezaka amin'ny alalan'ny dimming ny jiro ny efitrano fatoriany ary mametraka ny sasany mozika ao amin'ny tantaram-pitiavana. Ataovy azo antoka ny fandrianao tsy cluttered; fotsiny ny ankamaroan'ny olona tsy afaka ny hahatsapa tantaram-pitiavana amin'ny mahafantatra ny korontana manodidina. Aza avela ny efitrano fandriana ho mafana na mangatsiaka loatra toy ny indray mipi-maso dia mety ho roa turnoffs. Raha toa ka manana famerana mari-pana na rafitra fanafanana nametraka, zatra izany. Manokatra varavarankely na fanakatonana Afaka manampy anao koa ny mari-pana amin'ny normalizing ny efitrano fatoriany ary manao ny toerana tsara kokoa noho ny fahazoana Cozy.
Vonoy ny adin-tsaina
Adin-tsaina dia iray amin'ireo antony mahatonga ny fahita indrindra nampihena fiara firaisana ara-nofo. Vao haingana izay nahazo antontan'isa hita fa manodidina ny 15% ny olona manana libido ambany indrindra noho ny rarin-tsaina izy ireo eo amin'ny fiainana. Testosterone no mifehy ny hormonina izay firaisana ara-nofo amin'ny olona fiara. Toy ny olona mihalehibe (30 na mihoatra), ny testosterone haavon'ny manomboka midina; adin-tsaina mahatonga famokarana ny cortisol, ary mihena ny testosterone haavon'ny dia bebe kokoa. Izany, ny lehilahy matetika no nanelingelina ny adin-tsaina manana libido ambany noho ny olona hafa ny taona.
Raha te amin'ny fampodiana ny kilalaon'afo, ary te-hahazo tany ny toe-po ny fitiavana toy nahitàna araka izay nampiasaina hanao taona vitsivitsy indray, dia tsy maintsy mitady fomba mba hamono ny miady saina namanao Miatrika sy miaraka amin'izay koa, hatao ny tenanao de-miady saina. Ny tena tsara, tokony mifanampy amin'ny famerenana ny fahatsapana Miaraka Amin'ny alalan'ny nikapoka ny adin-tsaina. Hanome azy fanorana ary avy eo manontany azy mba hiverina ny famindram-po, maka fandroana miara-mafana, hanomana ny sakafo hariva miaraka, mandeha an-tongotra tao amin'ny saha taorian'ny sakafo hariva; ireo rehetra ireo dia hanampy anao sy ny namanao mba unwind sy hanangonanao ny fitiavana tanteraka fanaovana toe-po.
Ho azo antoka ianao sexy
Nahatsapa toy ny fanaovana ny fitiavana, tsy maintsy mahatsapa sexy aloha. Raha toa ka tsy sahy mijery ny fomba noho ny lanjan'ny tany ianao nahazo taona vitsy lasa, miezaka namely ny fanaovana fanatanjahan-tena sy ny manary ny sasany azy. Izany dia hahatonga anao hatoky kokoa, ary ho indray hanomboka hahatsapa ho sexy. Azonao atao koa ny miezaka avy Lingerie vaovao, fa manao antoka fa mahazo aina ao aminy; izany dia satria ny fampaherezana tena zava-dehibe ihany koa ny mahatsiaro ho sexy.
Mba ao amin'ny toe-po noho ny fitiavana, tsy maintsy manao zavatra izay hanafoana ny fahasorenana avy ny fifandraisanareo. Raha vao lasa ny fifandraisanareo mampientam-po, dia tsy sarotra ny mahazo an-tsara toe-tsaina mba ho fitiavana.
Nilaza Extreme tsara indrindra raha hoy izy ireo, “Mihoatra noho ny teny dia izay rehetra tsy maintsy…
Na izany avy amin'ny namana, ray aman-dreny, mamoafady, na Hollywood, isika rehetra manana vaovao tsy marina amin'ny…
Lavo amin'ny fitiavana no iray amin'ireo fihetseham-po mahagaga indrindra eran-tany. Feno…